FA MANINONA NO NIOVA MAINTY HO MAVOKELY NY ORON'NY ALIKA? - ALIKA
Ny lokon'ny oron'ny alika dia samy hafa amin'ny alika ka hatramin'ny alika arakaraka ny karazany. Mety ho mainty, volontany, aty, mavokely, na mitovy loko amin'ny palitaony. Indraindray ny oron'ny alika dia afaka manomboka loko iray ary miova amin'ny loko hafa rehefa mihantitra. Matetika ny alika kely dia teraka miaraka amin'ny orona mavokely, izay maizina avy eo. Inona no dikan'ny hoe rehefa ny oron'ny alika very ny pigment lasa mavokely na fotsy? Tsy mitovy ny antony. Indraindray dia tsy mampidi-doza ny de-pigmentation ny orona, fa indraindray kosa dia famantarana fa mila fitsaboana ny alika. Mifandraisa amin'ny mpitsabo anao raha tsy fantatrao ny antony mahatonga ny oron'ny alika very pigment.
Antony mahatonga ny oron'ny alikao mety ho potika:
Shinoa crested vovoka indray misintona alika kely
Ny toetrandro: Ny antony matetika mahatonga ny oron'ny alika very pigment dia antsoina hoe orona ririnina na orona oram-panala. Ny oron'ny alika sasany dia manova loko avy amin'ny loko mainty ho mavokely amin'ny toetr'andro mangatsiaka ary manjary maizina indray rehefa mafana ny andro. Matetika rehefa miova loko ny orona noho ny toetr'andro dia miova mavokely ihany ny ampahany amin'ny hita eo amin'ny sary etsy ambony. Orona oram-panala dia toa mifandray mivantana amin'ny maripana ary tsy mampaninona ny alika. Ny meloka dia heverina ho fahatapahana amin'ny anzima antsoina hoe tyrosinase, izay no mahatonga ny melanin. (Melanin no manome loko, na loko, ny volo, ny hoditra ary ny ampahany amin'ny maso.) Ny anzima dia marefo amin'ny maripana ary mihamalemy rehefa antitra.
Ny karazana sasany izay mora tohin'ny orona miova miaraka amin'ny toetr'andro Alika Mountain Bernese , Golden Retriever , Labrador retriever , Husky SY mpiandry .
Fahanterana: ny oron'ny alika dia mety hahavery ny pigment rehefa antitra.
Ratra: Raha tratry ny alika karazana trauma iray toy ny fikikisana na fikosoham-bolo, dia afaka mivadika mavokely ny orona rehefa manasitrana. Hiverina matetika ny pigment rehefa afaka kelikely.
Fihanaky ny bakteria: ny orona dia mety tsy manamaivana ny lokony fotsiny fa mety ho mirehitra, maratra, crusty na tsy salama. Mety te hifandray amin'ny mpitsabo biby ianao raha izany no izy.
Nasal de-pigmentation, antsoina koa hoe 'Dudley Nose' dia rehefa mivadika mavokely na fotsy mihitsy ny oron'ny alika noho ny antony tsy fantatra. Indraindray ny oron'ny alika dia tsy miova intsony. Amin'ny alika sasany dia hiverina indray ny loko misy azy na hiova tsindraindray.
Ny karazany mora tohina indrindra amin'ny Dudley Nose dia ny Afghan Hound , Doberman Pinscher , Golden Retriever , Setter Irlandey , manondro , Poodle , Samoyed ary ny Mpiandry Alemanina Fotsy .
Mifandraisa amin'ny allergy (contact dermatitis): Rehefa tsy mahazaka zavatra ny alika dia mifandray mivantana ny orony. Matetika dia voakitika ihany koa ny molotra, mety mila manao asa fikarohana ianao mba hahalalanao fa tsy mahazaka alika ilay alika. Ny orona ary indraindray ny faritra manodidina dia mety ho may, maratra, crusty na tsy salama. Indraindray ny alika dia mety tsy mahazaka karazana plastika sasany. Azonao atao ny manilika ny allergy amin'ny lovia sakafo plastika amin'ny alàlan'ny famindrana mankany amin'ny vilia vy tsy misy fangarony.
Pemphigus, aretin-koditra mifandray amin'ny hery fiarovan-tena: Ity aretina ity dia mety hiteraka fery sy faritra masiaka amin'ny oron'ny alika sy ny manodidina azy. Azo sitranina ny fepetra ary tokony hojerena ny mpitsabo biby.
Discoid Lupus: aretin-koditra iray mifandraika amin'ny hery fiarovana izay hiteraka fery amin'ny manodidina sy amin'ny oron'ny alika. Mety hiharatsy ny toe-javatra rehefa tratry ny masoandro ny alika.
Vitiligo: aretin-ketra izay misy vokany amin'ny hoditra satria manakana ny sela mitondra salama, mitondra pigmenta amin'ny alàlan'ny fanafihana azy ireo amin'ny hery manohitra. Ity toe-javatra ity dia tsy vitan'ny hoe afaka mamadika mavokely amin'ny orona alika fotsiny, fa mazàna dia ho hitanao ny fahaverezan'ny pigment amin'ny faritra hafa amin'ny vatana, ka ho fotsy ny palitao na amin'ny volo na petaka miparitaka. Ny korontana dia mety hiharatsy rehefa mandeha ny fotoana ary lasa fotsy alika fotsy. Ny alika miaraka amin'i Vitiligo dia matetika mahasalama satria matetika dia ny vokatr'ilay alika ihany no misy akony.
Ny karazany mora tohina indrindra amin'ny Vitiligo dia ny Dachshund , Doberman Pinscher , Mpiandry Alemanina , Labrador retriever ary ny Rottweiler .
Idiopathic dia toe-javatra izay mety hahatonga ny oron'ny alika, ny molony ary ny hodi-masony very loko. Tsy fantatra ny antony.
Syndrome toy ny VKH na Syndrome Uveodermatological (UDS) dia aretina autoimmune izay iarovan'ny tena manokana ny otrikaretina, ny sela T, dia manafika ireo sela mamorona melanina (melanocytes) ao amin'ny vatana. Melanin no manome loko, na loko, ny volo, ny hoditra ary ny ampahany amin'ny maso.
Ny alika misy orona mavokely na fotsy dia mora tohina sunburn ary tokony hitandrina. Mety mila manosotra takelaka masoandro ianao alohan'ny hamelana ny alika hivoaka. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny alika izay nanova loko ny orona dia tsy antony tokony hampiahiahy, na izany aza, indraindray. Aza hadino ny mifandray amin'ny mpitsabo anao mba hahazoana antoka fa tsy noho ny olana mifandraika amin'ny fahasalamana izany.
Fa maninona ny alikako no nanao an'izany?
Fikorontanana: Fiambenana an-tsandrin'ny alika kely
Toerana fialofana novonoina ho faty
Famantarana ny karazana canine ADN
Fahatakarana ny alikanao na ny alikanao
Kolom-panofanana alika Illusion
pics manga heeler alika
vorona fotsy misy tendany lava sy vavam-boasary
schnauzer kely sy chihuahua kely
sary an'ny alika kely terrier